Arle Uein milaza
Septambra 3, 2010 amin'ny 12:03 am
Manana bibikely vaovao amin'ny famoahana vaovao (0.6.3) ary plugin Mailpress. Rehefa te-haneho iray amin'ireo fandikan-teny ao amin'ny pejy, misy fahadisoana :
Fampitandremana: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Unregistered fahadisoana hafatra in ENTITY, tsipika: 4 in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php amin'ny tsipika 7
Fampitandremana: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA tsy mety Char sarobidy 1 in ENTITY, tsipika: 4 in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php amin'ny tsipika 7
Fampitandremana: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA tsy mety Char sarobidy 3 in ENTITY, tsipika: 4 in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php amin'ny tsipika 7
Fampitandremana: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: filaharana ']]>’ Tsy nahazo afa-po ao amin'ny ENTITY, tsipika: 4 in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php amin'ny tsipika 7
Fampitandremana: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: errorExtra anatiny afa-po amin'ny faran'ny ny antontan-taratasy ao amin'ny fikambanana, tsipika: 4 in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php amin'ny tsipika 7
Mahafaty fahadisoana: Antsoy ny mpikambana asa hasAttributes() amin'ny tsy zavatra ao /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php amin'ny tsipika 50
Septambra 6, 2010 amin'ny 11:31 am
Dia nametraka izany plugin, ary tsy nahita ny ady, Heveriko aho zavatra tsy hita any ho any.
Ny ady dia vokatry ny fomba ampiasain'ny Transposh mampiditra an gettext (amin'ny alalan'ny fanampiana ireo chars ary taty aoriana dia manala azy ireo) tokony ny ady mamaritra ianao tsy tokony hitranga.
Septambra 13, 2010 amin'ny 7:55 am
Mety hanampy ny safidy “mankarary gettext fampidirana” …
Septambra 13, 2010 amin'ny 10:06 am
Eny, Mino aho hanampy azy ho manaraka dikan-
Edward Mugits milaza
Septambra 5, 2010 amin'ny 5:45 am
Tiako ny zavatra hitako sy mamaky eto, vao tsy afaka ho fampiharana ara-teknika. Miomana ny hanana ny kafe toerana nohavaozina ny WP ary ity farany plug-in ho an'ny fandikan-teny dia tsy maintsy ho ahy. Rehefa nadika, izany no vaovao farany sy hameno ny pejy toy ny hoe tsy manam-paharoa pejy? Raha nanana 20 Endriky ny matoanteny amin'ny teny Anglisy, ary nadika tamin'ny teny Japoney, ve aho ho afaka hampiasa ny nadika pejy hamorona pejy iray tena ary afa-tsy ho toy izao ny velona sy ny hahafahan'ny pejy Meta feno Optimization?
Mila tranonkala iray natao ary te-mampiditra miasa ity, na iza na iza avialable ny mitanisa izany?
Septambra 6, 2010 amin'ny 11:29 am
Ny nadika pejy dia tena azo ampiharina pejy na inona na inona tanjona, Tsy fantatro izay hoe marina amin'ny Meta feno Optimization fa manantena tokoa izany miasa
Septambra 9, 2010 amin'ny 11:10 aho
(miala tsiny noho ny teny anglisy)
Fa ny poloney tranonkala ataoko eo amin'ny toerana misy anao teny poloney. Rehefa manova Lang hafa, Hataoko fa nandika ity anaram-boninahitra Lang Widget “Translation” ary ny safidy “Mametraha ho Default teny” ary “Edit Translation”
ohatra:. for Deutsh > fandikan-teny, Mametraha ho Default teny
Hanova ny fandikan-teny.
Fa rehefa hiova ho poloney (ny toerana misy anao Lang) Ity lahatsoratra ity dia amin'ny teny Anglisy, tsy poloney. 🙁
Nahoana no tsy ampy ny fandikan-teny gadget defalut Lang raha toerana misy anao dia hafa noho ny teny anglisy?
Septambra 14, 2010 amin'ny 10:51 am
Izany dia hofehezina any amin'ny ho avy dikan (0.6.4) tsy ho ela
Septambra 20, 2010 amin'ny 3:04 am
Salama, Manana olana amin'ny norvejiana nb_NO. Ny asa in buddypress vokany nadika ihany ny asa voalohany, asa hafa rehetra ny mijanona amin'ny teny anglisy…Any hevitra?
Septambra 20, 2010 amin'ny 3:26 am
Izaho koa hahazo fotsy pejy ho an'ny sasany ny fiteny…Azoko omena anao ny fidirana amin'ny fiaraha-monina ny tsy miankina raha te-hijery ny antony?
Septambra 20, 2010 amin'ny 3:38 am
Raha ny marina izany ilay fiteny izay tsy manana .mo raki-daza. I mahazo fotsy pejy…
Septambra 22, 2010 amin'ny 11:38 aho
Salama, ao amin'ny virtoaly eny fanahafana, mpiandraikitra ny tranonkala nampitombo ny php_admin_value memory_limit ho 128 ary ankehitriny dia miasa… Noho izany dia nisy marina, dia ny fahatsiarovana olana! Thx noho ny fanampiana!
Septambra 24, 2010 amin'ny 12:53 aho
Faly aho afaka nanampy
Septambra 24, 2010 amin'ny 8:54 aho
Eny, thx indray!
Mbola mahazo ny olana anefa, raha manana ny antontan-taratasy teny buddypress…Ao amin'ny ohatra norvejiana, afa-tsy ny asa voalohany Nadika, ny sisa dia tsy…misy hevitra?